မ ကြော်ငြာ နဲ့ ပြန့်နှံ့စေပါ။ | မာသင်
မ ကြော်ငြာ နဲ့ ပြန့်နှံ့စေပါ။
ကိုယ့်လုပ်ငန်း၊ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု အကြောင်းကိုလူအများသိအောင်၊ သတိထားမိအောင်၊ သဘောကျနှစ်ခြိုက်အောင် မိတ်ဆက်ပြောပြ ဆွဲဆောင်ခြင်း
ကိုယ့်လုပ်ငန်း၊ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု ၊အိုင်ဒီယာ အကြောင်းကို လူအများစိတ်ဝင်စားပြီးအချင်းချင်းဖြန့်ေ၀ ပြန့်နှံ့စေခြင်း
အင်တာနက်ဆိုတဲ့ အရာကြီး ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပေါ်မလာခင်တုန်းက အကြောင်းအရာတစ်ခု ပြန့်နှံ့ဖို့ဆိုတာ အချိန်အတော်ယူရပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စာနဲ့ဆက်သွယ်ပြန့်နှံ့စေဖို့ဆိုတာလဲ ကာလတစ်ခုထိအချိန်ပေးရသလို ကုန်ကျစားရိတ်လဲရှိပါတယ်။ ဖုန်းဆက်ပြီး ပြန့်နှံ့စေဖို့ဆိုတာလဲ လူုဦးရေရဲ့ခန့်မှန်းခြေ ၁၀ ရာခိုင်နုန်းလောက်ကပဲ ဖုန်းကိုင်နိုင်တော့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ပြန့်နှံ့ဖို့ဆိုတာ အတော်ခက်ခဲခဲ့ ပါတယ်။
ဒေဝူးရုပ်မြင်သံကြားစက်တွေ ပေါ်ပေါက်လာပြီး၊ တနိုင်ငံလုံး ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွေနဲ့ ဖြစ်ကုန်ပြီး ၊ နယ်မြို့တွေရဲ့အကောင်းဆုံး ညနေပိုင်း မိသားစု ဖျော်ဖြေရေး မှာ ရေဒီယိုတွေ အစား ရုပ်မြင်သံကြား စက်တွေက နေရာယူလာခဲ့ကြပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ brand awareness ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ဆွေးနွေးတိုင်း ပထမဆုံးမေးတဲ့ မေးခွန်းက ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ဘယ်လောက်ကြေငြာနိုင်သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ခဲ့ပြီး ကြော်ငြာနဲ့ပေါက်ခဲ့တဲ့ဘရန်းတွေ ဒုနဲ့ဒေးဆိုသလို ရှိလာခဲ့ကြတယ်။
ကြော်ငြာခြင်း နဲ့ပြန့်နှံ့စေခြင်း ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုမှာ ဘယ်နည်းလမ်းက ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို လူသိပိုများစေသလဲဆိုတာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စဉ်းစားစရာမေးခွန်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။
သေချာတာတစ်ခုက … ကြော်ငြာကို လူတွေ မကြည့်တော့ဘူး။ မတတ်သာလို့ကြော်ငြာခံရရင်တောင် အစ အဆုံးမကြည့်ပဲ ကျော်လိုက်ကြတယ်။
ခွေထဲမှာ ကြော်ငြာပါလာရင် ရစ်ကြည့်လိုက်တယ်။
ဖေ့ဘုတ်မှာ ကြော်ငြာပါလာရင် Skip Ads ကို နိပ်လိုက်တယ်။
လမ်းပေါ်မှာကြေငြာဘုတ်တွေကို ကားရပ်ပြီး ကြည့်ဖို့မပြောနဲ့ဘုတ်ကိုတောင်မော့မကြည့်ဘူး။
ဖေ့ဘုတ်ရဲ့ညာဖက်မှာကြော်ငြာ ကဏ္ဍ ရှိတာကို လူတော်တော်များများက သိတောင်မသိဘူး။
Classified Ads ဆိုတာယနေ့ခေတ်မှာ ဘာမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။
Yellow book ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကြီးတွေ ရုံးခန်းတွေမှာ မတွေ့ရတော့ဘူး။
အရင်းတုန်းက ရုပ်မြင်သံကြားက ကြော်ငြာတွေကို လိုလိုလားလားကြည့်ခဲ့ကြပြီး ကြော်ငြာထဲက မင်းသမီးနဲ့အတူကြော်ငြာသီချင်းတွေကို အတူလိုက်ဆိုခဲ့ကြတဲ့ ဈေးကွက်ကြီး။
ယနေ့ခေတ်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားကို ပစ်ပယ်၊ ဖေ့ဘုတ်မှာတောင် ကြော်ငြာကို Skip Ads လုပ်၊ shopping mall တွေမှာ အလကားကျွေးတဲ့ ထရိုဂျန်မြင်းရုပ်လေးတွေကိုလဲ ငြင်းပယ်တတ်လာတဲ့ ဈေးကွက်ကြီးဖြစ်လာပြီ။
ဈေးကွက်ကြီးက ပြောင်းလဲသွားပေမယ့် မပြောင်းလဲသေးပဲ ဆက်ပြီး ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး ကြေငြာနေတဲ့လုပ်ငန်းအချို့ကို ပြောချင်ပါရဲ့ဗျာ။
“မကြော်ငြာ ပဲ ပြန့်နှ ံ့စေ ပါ ” လို့။ ။
အရင်တုန်းက ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကြည့်လို့ကောင်းလို့အိမ်ပြန်လာရင် ကိုယ့်မိသားစု နဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း လူ၅ ယောက်လောက်ကိုပဲ ပြန်ပြောပြလို့ရတယ်။
ဒီနေ့ခေတ် ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကောင်းကောင်းကြောင်းကို ဖေ့ဘုတ်ပေါ်တက်ပြီး လူပေါင်း နှစ်ထောင်လောက်ကို ပြောနိုင်တယ်။ အဲဒီလူပေါင်း နှစ်ထောင်လောက်ထဲမှာ လူ၅၀၀ လောက်က ကိုယ်နဲ့အကြိုက်ချင်းတူရင် ထပ်ပြီး တစ်ယောက်ကို လူ နှစ်ထောင်လောက် ပြန်ပြောနိုင်တယ်။ နှစ်ဆင့်ပဲ ရှိသေးတယ် ။လူတစ်သန်းလောက်သိသွားပြီ။
ပြန့်နှံ့ခြင်းမှာ လူတစ်သန်းလောက်သိဖို့ငွေတစ်ပြားမှ သုံးစရာမလိုပါဘူး။
၁။ အများနဲ့မတူ တစ်မူထူးခြားခြင်း (နွားပြာကြီးအိုင်ဒီယာ)
၂။ ပျော်ရွင်မှုတစ်ခု ကိုပေးနိုင်ခြင်း (ဟာသ)
၆။ ကြောက်ရွ ံ့မှုကို ပေးနိုင်ခြင်း
ကိုယ့်လုပ်ငန်း၊ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အိုင်ဒီယာ များကို ….
မကြော်ငြာ ဘဲနဲ့……. ပြန့်နှံ့စေပါ။